Ragga xilal doonka oo ku soo badanaya Magaalada Muqdisho | Baydhabo Online
Ragga xilal doonka oo ku soo badanaya Magaalada Muqdisho
Xubnaha xiriirka dhow la leh Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) iyo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Xasan Cali Khayre, ayaa ku soo qul qulaya Magaalada Muqdisho, iyagoo ka rajo qaba in lagu soo daro Golaha Wasiirada.
Xubnahan, ayaa badankood waxaa ay ka kala imanayaan Wadamada Reer Galbeedka, sida Qaaradaha Yurub iyo Mareykanka. Golaha Wasiirada waxaa la fillayaa in ay u badnaadaan qurba-joog.
Shaqaalaha ka hawlgala Xarunta Madaxtooyada Somaliya, ayaa waxay indhahagu qabanayan iyagoo Garoonka Aadan Cadde ku soo dhaweynaya martida u imaaneysa Madaxda Dowladda Somaliya.
Shaqaalaha Villa Somalia oo wata gaadiidka aanay rasaastu karin, ayaa martida kala gaynaya Hoteelada Magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoteelada amnigooda aadka loo ilaaliyo sida Jazeera, Maka Al Mukarama iyo SYL.
Waxaa wax aad u adag ah in xubnahan oo dhami ay iska dhex arkaan Golaha Wasiirada, marka aad fiiriso xubno horey ula soo shaqeeyay xukuumaddii hore oo xusul-duub ugu jira ka mid noqoshada Golaha Wasiirada iyo Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, oo qudhoodu daneynaya in lagu soo daro Xukuumadda cusub.
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa Khamiistii sheegay inaanan cid kasta xil loo dhiibi karin, balse ay ku dadaali doonaan in ay soo dhisaan xukuumad haysata taageerada shacabka.
Ra’iisal Wasaare Khayre iyo Madaxweyne Farmaajo, ayaa Magaalada Muqdisho ka wada, wada-tashiyo ku aadan xubnaha lagu wado in ay ka midka noqdaan Golaha Wasiirada ee Xukuumadda.